Il consiglio di oggi 17 Settembre 2020 da un autore siriaco anonimo | Ilblogdellapreghiera
Womanhụnanya nke Chukwu, n’ịchọ ndị mmehie, ka nwanyị na-eme mmehie n’agwapụtara anyị. N'ihi na n'ịkpọ ya, Kraịst na-akpọ agbụrụ anyị niile ka anyị hụ ya n'anya; n’onwe ya kwa, ọ dọtara ndị mmehie niile na mgbaghara ya. Ọ gwara ya, ma ọ kpọrọ ihe nile e kere eke ka amara ya. (...)
Onye ka ebere nke Kraist na-agaghi erute ma ọ bụrụ na ya, ịzọpụta onye mmehie, nabata ọkpụkpọ oku nke onye Farisii? N'ihi nwanyị ahụ agụụ na-agụ mgbaghara, ya onwe ya chọrọ ka agụụ na-agụ tebụl Saịmọn onye Farisii, ebe ọ pụtara n'okpuru tebụl achịcha, ọ kwadebere maka onye mmehie, tebụl nke nchegharị. (...)
← Na post gara aga Gara aga post:Onye ụkọchukwu Katọlik mara mma na Italy, mara maka nlekọta nke 'ikpeazụ'
Ọzọ Post → Post ozo:Gịnị kpatara "anyị enweghị ihe kpatara na anyị anaghị ajụ"?